Kyushu University - Ọmụmụ na Japan. EducationBro Magazine
Echefukwala discuss Kyushu University
Na anyị 100th ncheta na 2011, Kyushu University kpọlite ​​ndị slogan “itunanya Top 100 University” ka na-amali elu n'ime n'elu narị mahadum ke ererimbot ke niile ubi. Isi anyị nwere nkà ihe ọmụma bụ “-anọgide na kwurula mgbanwe dị ka nke ọma dị ka iji hụ na mba ofesi àgwà nke mmuta, na-aghọ a center nke nnyocha na agụmakwụkwọ nke kasị elu ụkpụrụ, jupụtara vitality, na mgbe niile na-agwa okwu ga-eme n'ọdịnihu nsogbu.”
Kyushu University ume ka a isi mahadum bụ na-eme nnyocha na-eduzi ihe, isi agụmakwụkwọ ọmụmụ na a dịgasị iche iche nke ubi na ndabere nke amamihe ha ọchịchọ ịmata. A sara ntọala maka agụmakwụkwọ nnyocha enriches omenala na-elekọta mmadụ ndụ, -aghọ ndị motivational ike maka ọhụrụ, na kwere ka anyị ji obi ike merie otu ugboro-apụghị ichetụ n'echiche zuru ụwa ọnụ gburugburu ebe obibi mbipụta, ka anyị ugbu a ịgakwuru maka enyemaka na ume nsogbu, na na daa ọrịa na ọgwụgwọ nke na-enweghị ngwọta ọrịa, nke ewetaworo ha ọtụtụ n'ịrụzu oké ihe. Ilekwasị anya otu ugboro ọzọ na ndị a isi ụkpụrụ nke agụmakwụkwọ nnyocha, anyị ga-eme ka support usoro na-azụlitekwu ya.
Na agụmakwụkwọ nnyocha, anyị ga-aghọkwa ndị akwọ ụgbọala odudu maka kọntaktị n'etiti dị iche iche ubi iji zụlite ọhụrụ ókèala. Nzube anyị ma na-akwalite ukwuu pụrụ iche agụmakwụkwọ ubi nakwa dị ka iwekota na a gwakọta ndị a agụmakwụkwọ ubi n'ime a ukwuu dum.
N'ihi na ebe na-atụ anya na-eduga pụtara ìhè ụwa-klas research rụzuru, anyị ga ịhụ maka inwekwu elu ma na-edebe onye mesiri ike na-akwado ndị a ubi na-etolite a ụwa-klas nnyocha center, ifịk ifịk na-akwalite ọnwụ onu nnyocha na-eduga ná idozi nsogbu ndị mmadu ihu na site proposing na-egosi ọhụrụ na-elekọta mmadụ na usoro.
Science na technology, gụnyere Humanities na-elekọta mmadụ na sayensị, niile support elekọta mmadụ na mmepe. In addition, n'oge a na-achọ mmadụ ndị pụrụ na-arụsi ọrụ na a globalizing ọha mmadụ na aku na uba. Ndị dị otú ahụ mkpa ịzụlite ihe ọmụma bụ isi gafee Humanities na sayensị nakwa dị ka interdisciplinary echiche nkà ihe-edozi nsogbu na ikike na àgwà na-autonomously na-amụta ime ka a mata nsogbu, ma chota. Ekwurịta okwu dịkwa oké mkpa ịdị na-akwado na-ewu ná mma ndị na-ejide dị iche iche ụkpụrụ, na a na-agụnye asụsụ ala ọzọ proficiency. Kyushu University Aims develope dị otú ahụ na nkà na ya na ụmụ akwụkwọ, na site ifịk ifịk na-akwalite ọmụmụ ná mba ọzọ na ya na isi agụmakwụkwọ ngalaba na ọhụrụ ngalaba na-akwado, anyị ga na-azụ n'ọrụ ndị na-amụ na elu mba mmata.
Kyushu siworo na-esi abanye Japan ka a na-continental mmepe anya kemgbe oge ochie ma mmadụ nwee obodo omenala na ndidi n'ihi ọdịnala dị iche iche. In addition, na campus-emi odude ke nnọọ ebe na mbụ wee continental omenala, ọ gbara ndị ọgaranya ọdịdị nke oké osimiri na ugwu. Amụrụ na a ọmarịcha ọdịbendị na eke na gburugburu ebe obibi, na magburu onwe nkụzi na muta na nnyocha, a cosmopolitan na-amụrụ ahu, na a dịgasị-sitere na mmekọrịta ndị mmadụ na mpaghara obodo na mpaghara ụlọ ọrụ; ha ga-aghọ onwe ya ma ghọọ n'ọdịnihu isi nke ọha mmadụ.
Na ala ịmụ na merela agadi bi, ọ bụ oké egwu ịzụlite ụlọ ọrụ na ohere inweta ọrụ iji zụlite ma na-agafe on a ọgaranya omenala underpinned site vibrant aku ọrụ. Kyushu University ga-eme nnọọ ka ihe e kere eke na mmepe nke obodo ụlọ ọrụ site na-eduga ọhụrụ na sayensị na nkà na ụzụ. N'afọ adịbeghị anya, sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ e etinyere ngwa ngwa ma emejuputa atumatu ọha mmadụ site mbara-sitere na interactions n'etiti mahadum, ụlọ ọrụ, Bekee, na onwe oru. Dị ka hụrụ na anyị nnyocha na hydrogen ike na-elekọta mmadụ ozi akụrụngwa, Kyushu University-eme ka mpaghara vitalization site n'ịghọ isi nke-emeghe ọhụrụ na site n'iji ya na a siri ike imekọ ihe ọnụ dị n'etiti ụlọ ọrụ, academia, Bekee, na onwe oru.
Relocation ka Ito Campus na concomitant inwetara nke ụlọ ọrụ, nke malitere na 2005, na-enwe ọganihu were were na a ga-agwụ agwụ site gbasara ego obodo afọ 2018.
Kwupụta na mmejuputa iwu ndị a mgbaru ọsọ, ikpeazụ October Kyushu University formulated "Action Plan 2015."
Action Plan (isi ihe)
– -Eduzi nnyocha nke kasị elu zuru ụwa ọnụ ọkọlọtọ na-eke ọhụrụ
– Eme ka e nwee zuru ụwa ọnụ talent
– Inye onyinye iji obodo na mba obodo site merela agadi nlekọta ahụ
– -Emepe emepe na-enwekwukwa campus na ụmụ akwụkwọ, mkpara, na ngalaba òtù nwere ike ịbụ mpako nke.
– Nhazi mgbanwe
– A mahadum na-amalite na tandem na otu
Kyushu University akwalite a dịgasị iche iche nke omume nke mmuta, research, adakarị na nkà mmụta ọgwụ, na onyinye a na ọha mmadụ na-ekwusi ya ọnọdụ dị ka a mahadum na-mgbe ahụhụ ndị ahụ ọ ga-eme n'ọdịnihu nsogbu.
Gụsịrị akwụkwọ School of Law – English Program
Ị chọrọ discuss Kyushu University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Kyushu University ukara Facebook
Tokyo Medical na Eze University Tokyo